Ama-crystalts asetshenziselwa ukufeza injongo yawo. Isikhathi esivame ukubuka ifoni, tablet, noma i-laptop. Noma kunjalo, ukubukela abesifazane akuwona uphawu lwe-Stone Age. Ziba uphawu olubalulekile lwesithombe. Uphawu lwesimo, ukunambitheka okuhle, ubunikazi. Ama-watches amahle kakhulu ama-ladies akwenziwa eSwitzerland, eJapane, eJalimane.
Amawashi e- Longines Womama
Ngemva kokubona isibonakaliso se-Longines ekudonsheni, ungaqiniseka - uthola ama-watch watch best. Nakuba abakhiqizi abaningi bewashi banamamodeli amaningana aphezulu ekugcineni ekilasini eliphezulu. Isithombe somkhiqizo we-Longines ngesimo se-hourglass enamaphiko, njengokungathi ukhuluma ngomlando ocebile nemikhuba yobudala yomkhiqizo wokubuka ohamba phambili. Lona uphawu lokubuka oluhlonishwe kakhulu. I-firm iheha ukukhangisa abantu abadume kakhulu. ERussia, ubuso buka Longines ngu-Oleg Menshikov. Ikhwalithi yaseSwitzerland yaseLonginj idume ngokucacile kwayo futhi ingashintshi isitayela esiyingqayizivele. Iningi lamamodeli liboniswa owesifazane ohloniphekile ophumelele.
Ladies babheke i- Tissot
I-Tissot izama ukuba khona kuwo wonke ama-niches ebhizinisi lokubuka. Iveza ama-ladies ahloniphekile, ama-sporty and tech-tech. Ngisho nasekhulu leminyaka ngaphambi kokugcina, uTissot wanikeza amawashi eNkantolo Yombuso waseRussia. Futhi imodeli yeZAR yaba yindabakwane emlandweni wokubuka. Kwakuhloswe ukuba kube yizikhulu futhi kubonakala sengathi kuphephe kakhulu. Futhi namhlanje imodeli yeZAR iyiphupho labaqoqi.
Amawashi e-Tissot abhekwa njengentando yeningi, esebenzayo, ikhwalithi. I-Tissot ikhiqiza amawashi amahle kunazo zonke kubagijimi nabathandekayo bezintandokazi zobuchwepheshe. Isibonelo, imodeli ye-multi-functional T-Touch isibe yinye yeyokuqala, esebenzisa izilawuli zokuthinta kwi-glass sapphire. Kodwa-ke, ngenxa yokwehla kwamamodeli, uTissot akazange alahlekelwe ukuthembeka okuphezulu.
Ladies babheke i- RADO
I-RADO brand ayikho ezindlebeni zomuntu wonke. Lena inkampani "encane" ngamazinga omlando wokubuka. "Uneminyaka engu-40 kuphela". Ukufaka imakethe ye-watch esindile, inkampani entsha kufanele imangaze amakhasimende ngento ethile, thola iklayenti layo. Futhi kwakukhona indlela yokuphuma. I-RADO incike ebuchwepheshe obungavamile. Le nkampani yaqala ukukhuphuka kwayo ngokukhululwa kwamawashi ngamasongo kanye namacala avela ku-ceramics anganqamuki amathunzi amahle. I-White, i-platinum-gray, i-black-blue, i-black saturated ibe imibala ye-RADO.
Futhi namuhla inkampani isekelwe ubuchwepheshe besikhala. Uye wathola imiklomelo ngokuphindaphindiwe emisha nokubukwa. Iwashi elihle kakhulu ngesitayela esincane sokusebenza nokucubungula okuyingqayizivele kuyoba uphawu olusemqoka wesifazane wanamuhla. Ama-RADO amawashi azohlala kuze kube phakade. Izinto zokugqoka ezinamandla zokugqoka, i-lanthanum, i-ceramics ephezulu, ama-glasses, amadayimane nekhwalithi elingenamthetho kuzofakazela ngokucacile lokhu.
Amawashi wesifazane aseJapane
IJapane ungumholi ongamangalelwa e-electronics. Ukuphakama kwalo "kagesi", kuqinisekiswe embonini yokubuka. Inkampani yaseJapane uSiiko yiyena owokuqala emhlabeni ukuqamba ubuchwepheshe bokubuka ama-quartz. Ukubukwa kwe-elekthronikhi akukwazi ukuziqhenya ngezinqubo eziyinkimbinkimbi. Kodwa ziyiqiniso ngokunembile. Igama lenkampani Seiko lihunyushwe ngokuthi "olunembile". Iqiniso, ukushaja kwebhethri kuphelile. Eqaphela lokhu, ngo-1969 uSeiko waqala ukufuna imithombo yamandla "ephakade", ekwazi ukushintsha ibhethri.
Owokuqala emhlabeni wabonakala indlela ye-quartz yesistimu ye-Kinetic enezizukulwane ezizenzekelayo ngonyaka ka-1988. Kusukela kulo mzuzu wokuvuselela i-watch nehlelo le-Kinetic livuselelwa ngokuzenzakalelayo. AmaJapane aphumelela ekuhlanganiseni ukucaca kwe-cosmic yokunyakaza kwe-quartz futhi ngesikhathi esifanayo ukwenqaba ukushintsha amabhethri. U-Seiko ubukele uhlelo lwe-Kinetic luqokomisa abesifazane abasebenzayo abazisa yonke imillisecond yokuphila kwabo.
Enye inguquko ebhizinisini lokubuka kwakuyiCitizen yenkampani. Buka lo mkhiqizo waseJapane lapho uzwa. Le nkampani incike ekutheni amandla angenakuphela kwelanga. Amawashi, ama-calculators nezinye izinto ze-elekthronikhi ezithandwayo zelanga zithandwa kakhulu. Ubani ozolahla iwashi "elingunaphakade", lapho akudingeki ushintshe amabhethri bese uphazamisa amawashi? Umqondo we-Eco-Drive uthathwe ngabanye abakhiqizi. Kodwa abemi bebambe iqhaza kule ngxenye yemakethe. Amawashi angcono kakhulu ale nkampani yizibonelo zezemidlalo nezentsha. Ziyahluka ngezindleko zentando yeningi nokuthembeka kweJapane.
Akunakwenzeka ukunganaki i-Japanese Casio . Le nkampani igxile ekukhiqizeni ama-watch multi-function watches ezemidlalo futhi yaba igunya elaziwa kule ngxenye. E-casio ama-crystal clock amancane kunemisebenzi eminingi kangangokuba ngeke kube nesikhathi esanele sokuzifunda. Ochwepheshe be-Casio kuqala bafakwe ohlelweni lwewashi le-GPS. Uma intombazane ifuna ukumangala ngokuthenga kwayo, i-watch Casio iyinhle kakhulu. Akukhona nje abangane, kodwa futhi isoka lizovula imilomo yabo ebusweni be-thermometer, izinga lokujula, i-calculator, i-timer, i-barometer, uhlelo lokunquma indawo kwehora elilodwa. Okuphambili kakhulu yizilwandle ze-Sea Pathfinder ne-Pro Trek.
Eminyakeni yamuva, i-Casio evela kumkhiqizi omkhulu wewashi elihloniphekile iphenduka ibe ngumfanekiso wesithombe. Amawashi enkampani abe yisici sesitayela, izesekeli zefashini. I-Casio ayihambisani nemfashini, kodwa iba yilokho okungekho umthamo wesimo esimweni semvelo. Ubuchwepheshe kanye "nokuzikhandla" kuhlanganiswe ne-techno-design entsha yentsha. Ukubuka ama-Casio akufanelekile kuphela kubafana, kodwa kumantombazane. Kodwa abesifazane abaqashisayo bebhizinisi, njengoba bekusho, "hhayi kule ndaba".
Inkampani yaseJapane i- ORIENT efana noyedwa "eboshiwe" yabathengi besifazane. Ngakho-ke, iwashi lenza okulula kakhulu ukusebenzisa. Kodwa ngefomu ezinhle. Ukukhokhiswa kwebhethri ye-kinetic kanye namapaneli we-solar kuzokuvumela ukuba ukhohlwe ngokushintsha ibhethri nokuvala iwashi. Abesifazane bangaziqhenya kuphela ngeklamo yanamuhla enhle kakhulu, amakristalu avela ku-Swarovski, futhi babheke ukuthi usephuzile kangakanani ngosuku. Amamodeli angu-ORIENT angenxa yazo zonke izigaba zabesifazane. Futhi inkanyezi engathandeki, nomfundi olula, futhi owesifazane webhizinisi uzothola imodeli ekuthandweni kwabo.
Iwashi akuyona nje inkomba yesikhathi. Sekuyisikhathi eside sibhekene nento engaphezulu. Lokhu kuyinto ewusizo, kanye nesesekeli sefashini, nebheji. Mhlawumbe, ngesitolo esilandelayo uzohamba namawashi angcono kakhulu wabesifazane futhi ube umbusi ngokuhamba kwesikhathi!
I-London kuze kube phakade: iqoqo lezinhlobonhlobo zeLondon nguDe Beers
Ngomoya wesendulo: isongo sikaHermes Delos
Iseluleko esiwusizo somthwebuli wezithombe eziqalayo
Izinkukhu zezinkukhu nge-artichokes ne-pasta
I-Kobler enezikhukhula kanye nama-blueberries
Nambitha ngemininingwane: i-mushroom sauce kusuka emasimini ngekhilimu
I-pie yangaphakathi ne-bacon kanye noshizi
Imfihlakalo yabantu base-centenarians
Intombazane enolwazi lobuhlobo bocansi
Umzimba wesifazane, ubuhlungu besisu
Kungani owesilisa esaba ukuhlangana?
U-Alena Vodonaeva uhlambalaze uVera Brezhnev ngenxa yenanveli noMaledze, imininingwane
I-Cappuccino Yonyaka Omusha
I-eucharis flower yase-Indoor noma i-lizoni lama-Amazonian